Gabdho soomaaliyeed oo u soo baxay wareeggii ugu dambeeyey ee tartanka “gabyaaga deegaanka” | Somaliska
Gabdho soomaaliyeed oo u soo baxay wareeggii ugu dambeeyey ee tartanka “gabyaaga deegaanka”
Magaaladda Malmö ee caasimadda seddexaad ee dalkaan Iswiidhan, ayaa waxaa maalintii jimcihii ka dhacay tartan suugaaneed xagga gabayada ah oo ay dhalinyarada ajaanibta ah ee ka qeyb qaadanayeen. Tartankan oo loogu magac darray “Gabyaaga deegaanka” Labbo ka mid ah gabyagaasi ayaa waxaa ka mid ah gabdho soomaaliyeed oo u soo gudbay wareegii ugu dambeeyey. Kaas oo lugu qaban doono magaaladda caasimadda ah ee Stockholm.
Labbo ka mid ah sadexda gabayaa ee u soo gudbay wareegga kama dambeeysta ah ayaa waxaa la kala yiraahda Khadra Cismaan, Ikraam Cabdulqaadir.
“Markii hore waan gariirayey cabsi dareed, kadibna waa hagaagtay” ayey tiri Khadra oo ka hadleeysay sida dareenkeedu ahaa markii ay masraxa soo kortay oo ay akhrineysay gabeygii ay kaga qeyb galeeysay tartanka. Ikraam Cabdulqaadir oo iyadana tartankaasi qeyb ka aheyd ayaa sheegtay in gabeyga u ahaa dhiiragelin, marba hadeeysan horey tartan noocan oo kale ah uga qeyb qaadan.
“Ani ahaa wuxuu ii ahaa dhiiragelin xoogan, maxaa yeelat weligeey masrax maan soo istaagin oo kama qeyb qaadan tartan suugaaneed, laakin wuxuu ahaa mid qiimo leh” ayey tiri Ikraam oo sheegtay in gabeyga ay tartanta uga qeyb galeen ahaa mid xaqiiq ah oo ka tarjumayey dhacdooyin iyaga soo maray. Ikraam waxaa kale oo ay sheegtay in gabeygu ka hadlayey bulshadda iyo sideey u aragto ruux madoow uu muslin ah.
“Gabeeygu waxaa uu ka hadlayey waxyaabo bulshadda quseeya, sida inaad noqoto madow misna muslin ah. Wuxuu ka hadlayey sidoo kale inaad ku dhex korto deegaan qofku dareemayo inaan looga baahneyn” ayey tiri Ikraam. Khadra oo dhinaceedana hadalka qaadatay ayaa farta ku fiiqday in ay dooneeyso in bulshadu fahanto waxa ay dareemeeyso, qiimeeyso lana maqlo.
Ugu dambeyntiina urrurka la yiraahdo “Midowga deegaanka” ayaa soo qaban qaabiyey tartan suugaaneedka gabayada ah. Waxaana wareegga ugu dambeeya ee tartanka lugu qaban doona magaaladda caasimadda ah ee Stockholm bishi nofeember 4-5teeda.
Mudooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa aad u soo muuqanayey dhalinyaradda soomaaliyeed ee dalkaan Iswiidhan ku nool oo kaalin wax ku ool ah kaga qeyb qaatay tartanadda suugaanta ee deegaanadda ajaanibta ku badan tahay. Dhawaan ayey aheyd markii dhalinyarro soomaaliyeed oo ku kala nool magaalooyinka Göteborg iyo Stockholm kaalimaha koowaad ka galeen tartanka gabyaaga deegaanka.
Gaari xaamul ah oo dad ku laayey magaaladda Stockholm ee caasimadda Iswiidhan